चर्चित गायकको विवाह भएको २ हप्तामानै होटलबाट खसेर निधन, फ्यानहरु स्तब्ध, श्रीमती शोकाकुल – List Khabar
Home / समाचार / चर्चित गायकको विवाह भएको २ हप्तामानै होटलबाट खसेर निधन, फ्यानहरु स्तब्ध, श्रीमती शोकाकुल
admin November 27, 2021 समाचार Leaveacomment 205 Views
काठमाडौं । तपाईं भाग्यमाथि कत्ति विश्वास गर्नुहुन्छ ? तर भाग्यमानी र अभागी मानिसहरु यो दुनियाँमा छन् । यसरी फरक छुट्याइन्छपनि । यस्तै एक अभागी जोडिबारे आज हामी तपाईंलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
२ हप्ता अघि गायक एमसी केभिनले प्रेमिका डियोलेन बेजेरासँग विवाह गरे जो पेसाले वकील हुन् । तर कस्तो अभाग ब्राजिलका यी चर्चित गायक एमसी केभिनको होटलको पाँचौं तल्लाबाट खसेर मृत्यु भयो ।
ब्राजिलबाट निकै स्तब्ध पार्ने यो जोडीको समाचार बाहिर आएको छ । चर्चित गायकको अचानक मृत्यु भयो । गायक केवल २३ बर्षका थिँए । गायकको मृत्युले फ्यानलाई दुःखी बनाएको छ । प्रसिद्ध ब्राजील गायक एमसी केभिनको हालै विवाह भएको थियो । होटलको पाँचौं तलाबाट खसेपछि उनको मृत्यु भयो । केभिनको आकस्मिक मृत्युले उनकी श्रीमती डियोलेन बेजेरा शोकमा छिन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, केभिन एमसी केभिन ब्राजीलको रियो दि जेनेरियोको एक होटलमा बसिरहेका थिँए । उनको कोठा होटेलको ११ औं तलामा थियो । प्रहरीले मृत्युबारे आवश्यक थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसका साथै प्रहरीले पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । समाचारका अनुसार केभिनको होटेलको पाँचौं तलाबाटA खसेर मृत्यु भयो । बताइए अनुसार उनका केही साथीहरू पनि त्यस होटेलको पाँचौं तलामा थिए । गायक आफ्ना साथीहरूलाई भेट्न उनीहरुको कोठामा आइपुगेका थिए ।
त्यहाँबाट उनी खुट्टा चिप्लिएर लडे भन्ने खबर बाहिर आएको छ । उनलाई तत्काल नजिकैको अस्पताल लगिएको थियो तर अस्पताल पुग्नु अघि नै उनको मृत्यु भैसकेको अस्पतालले पुष्टि गर्यो । एमसी केभिनको मृत्यु पछि, उनकी श्रीमती डियोलानले उनको मृत्युको खबर साझा गर्दै इन्स्टाग्राममा एक भावुक तस्विर पोस्ट गरेकी छिन् ।
Previous सबै विद्यालय बन्द !
Next मुख्यमन्त्री राईले भने- म रचना रिमाललाई वान साइड लभ गर्छु